Ugaarsiga Culimada & Dilkii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax - Warbixinta KON | KEYDMEDIA ONLINE
Ugaarsiga Culimada & Dilkii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax - Warbixinta KON
Muqdisho (KON) - Iyadoo Sheekh C/qaadir Nuur Faarax (Gacamay) oo ka mid ahaa Culimada Soomaaliyeed lagu toogtay Masaajid ku yaala magaalada Garowe xili uu u taagnaa Salaadii Casir Galabnimadii Jimcaha ayaa dilkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ad Culimada Waaweyn ee Soomaaliyeed oo ka qaybgalay Aaska Sheekha ayaa wuxuu sheegay in loo baahanyahay Dowlada iyo Maamulada ka jira wadanka in ay xil gaar ah iska saaraan amaanka culimada Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay Sheekha in xiligaan loo soo jeestay in la baabiyo culimada oo ah indhaha bulshada Soomaaliyeed.
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka xukuumada Soomaaliya C/kariin Xuseen Guuleed oo asna ka hadlay Sheekha ayaa wuxuu sheegay in loo baahanyahay in culimada Soomaaliyeed ay dowlada kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka wadanaka ka jira.
Sidoo kale wasiirka Arimaha gudaha ayaa wuxuu sheegay in dhankooda ay ka walaacsanyihiin dilalka loo geesto culimada laakiin wuxuu sheegay in looga bixi karo wada shaqayn iyo waliba in la yeesho iskaashi buuxa oo hal meel looga soo wada jeesto dadka diinta ka been sheegaya.
Inkastoo anan lagaranaynin cida ka danbaysa dilka Sheekh C/qaadir Nuur Faarax ayaa hadana madaxweynaha maamulka Puntland C/rixmaan Sheekh Maxamed Faroole wuxuu ku eedeeyay in ay ka danbeeyaan Al-Shabaab.
Sheekh Muqtaar Roobow cali Abuu Mansuur oo asna ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ayaa sheegay in dilkaasi aysan wax lug ah aysan ku lahayn Al-Shabaab.
Marka laga tago Sheekhaan la dilay maalintii nimcaha waxaa jira dilal badan oo kale oo loo geestay mashaa'iq kale oo aan ka ahaa wadanka kuwaasi oo agu dilay magaalada Muqdisho iyo waliba qaar kale oo ka mid ah gobalada Soomaaliya